Mustafa Maxamed- Orodyahan soomaaliyeed oo kudayasho muddan.
Qormadaan waxaan kaga hadli doonaa taariikhda iyo guulaha uu gaaray orodyahanka soomaaliyeed ee Mustafa Maxamed. Orodyahanku waxaa uu matalaa wadanka iswiidhan oo uu yaraan kusoo galay haystona dhalashadiisa.Guulaha uu gaaray Mustafa waxaa ugu dameeyey isagoo maalintii sabtida ee 28-ka bisha luuliyo jebiyey rikoor orodka 3000 m ee wadanka Sweden kaas oo uu 31 sanno kahor dhigay nin Iswiidhish ah ee la yirahdo Anders G�rderud.
Ninkaasi Waxaa uu masaafadaas 3000 m ku orday 8.08,02 halka uu mustafa ku orday 8.05,75. Guushaas uu Mustafa soo hoyey waa mid wadanka swiidhan oo dhan aad iyo aad looga hadal hayo. Waxaa la filayaa in mustafa guulo kasoo hoyo ciyaaraha aduunka ee fudud ee bisha augusto ka bilaaban doona magaalada Osaka.
Taariikh nololeedka iyo guulihii mustafa.
Mustafa muhamed waxaa uu ku dhashay wadanka soomaaliya kolkii sanadku ahaa1979. Kolkii uu yaraa waxaa uu mustafa ku noolaa baadiyaha soomaaliya,waxaana uu raaci jirey geel iyo ari ilaa uu ka gaarey da`da 7 sano.Kadib waxaa reerka mustafa usoo wareegeen magaalada muqdisho ee caasimada wadanka soomaaliya. Halkaasna waxaa uu ka bilaabay waxbarashada dugsiga hoose.Mustafa waxaa uu yimid iswiidhan isagoo jira 11 sano.Balse waxaa uu orodka bilaabay isagoo ay da`diisu tahay 16 sano jir.
Waxaa uu mustafa ordaa masaafooyin kala duwan ee dhinaca orodka ah kuwaas oo ka bilaama 1500 meter. Mustafa guulo aan halkaan lagu soo koobi karin ayuu ka gaarey ciyaaraha orodada. Tusaale ahaan isgoo 18 jir ah1997-dii ayuu bilad qalin ah ku qaatay tartanka orodada ee dhalinyarada yurub. Kolkaas oo uu mustafa orday masaafada 10000 ee miter.
Ciyaarihii Olombiga ee sanadkii 2004-tiiayaa uu mustafa wacdaro ka muujiyey isagoo usoo gudbey ciyaartii kama dameysta ahayd ,halkaasoo uu ugu dameyntii galay kaalinta 13 naad.Ciyarta 3000 ee hinderka ayuu ka qayb qaatay kolkaas. Ciyaaraha yurub ee kaymaha iyo meelaha lakala xir-xiranlagu ordo ayuu sanadkii 2006-da ka galay mustafa kaalinta 3�ad. Halkaas oo lagu gudoonsiiyey bilada maarta ah. Tartankii ciyaaraha fudud ee yurub ee la qabtay sanadkii 2006-da waxaa uu mustafa galay kaalinta afraad.
Guulaha uu mustafa ka gaaray ciyaaraha wadanka Iswiidhan gudihiisa ayaa iyaguna aad iyo aad u tira badan. Guulahaas oo dhami waxaa ay mustafa ka dhigeen mid aad looga yaqaan wadanka Iswiidhan isla markaasna ay dhalinyarada yar-yari ku daydaan. Tusaale ahaan waxaa guushii ugu dameysey ee mustafa aad iyo aad wax uga qoray jaraa�dka kasoo baxa wadanka Iswiidhan.
Joornaalka la yiraahdo �DN� oo ka mid ah kuwa ugu waaweyn Iswiidhan ayaa qoray maqaal uu kaga hadlaayo guulaha uu gaaray Mustafa. Joornalku waxaa uu qormadiisa maqaal uga dhigay sidatan: �. Fr�n Mogadishu till H�lle IF
Taasoo macnaheedu yahay waxaa uu ka yimid muqdisho, waxaana uu yimid H�lle IF oo ah kooxda ciyaaraha fudud ee uu mustafa ka tirsan yahay. Joornaalka kale ee la yiraa Aftonbladet ayaa isna qaybtiisa Isboortiga kaga faalooday Mustafa. Waxaa tafariraha qaybta isboortigu ku nuux-nuuxsaday inuu mustafa oo kasoo jeeda wadanka soomaaliya usoo hoyi doono iswiidhan guulo wax ku ool ah kolkii ay bilaamaan ciyaaraha aduunka ee fudud.
Mustafa maxamed waxaa uu guulaha aan kor kusoo sheegnay ku gaaray dadaal iyo dulqaad badan. Waxaa uu Mustafa sanad walba degsadaa yoolal kala horeeya oo uu doonaayo inuu gaaro. Waxaa uu sameeya tababaro joogto ah si uu u gaaro halka uu doonaayo. Waxaa uu markasta isku dayaa inuu la tababarto ciyaartoyda orodada ee dunida ugu fiican. Kolka ay cimilada iswiidhan u masaabixi weydo inuu iswiidhan gudaheeda ku tababartona waxaa uu u dhoofaa wadan kale ee cimiladiisu ku haboon tahay hadba tababarka uu markaas sameynaayo.
Mustafa inkastoo uu u tartamo Iswiidhan hadana waxaa uu ka hadlaa oo inta badan ka fekeraa dhalinta soomaaliyeed meel ay joogaanba. Mar uu la hadlaayey mid ka mid ah joornaalada Iswiidhan, isagoo wax laga weydiiyey dhaqanka soomaaliya iyo waxayaalaha dhalinta muhiimka u ah waxaa uu yiri:
�Daqanka Soomaalida ee Iscaawinta iyo iska warqabku waa mid aad u fiican. Waxaad la noolaan kartaa qaraabada adigoo aan ka duwaneyn ilmaha reerka. Soomaaliya adeero, abtiyaal, habaryaro ayaa wada degan, kuwaas oo dhamaantood lagu magacaabo �reer�
Waxaad u laaban kartaa deriska adigoon qorsheyn halkaas ayaa cunto ka cuni kartaa. Caruurta waxaa muhiim ah in la siiyo fursad ay horumar ku sameyn karaan. Waxbarashada iyo nabadgelyaduba waa muhiim, taas oo suurto gelin karta in qofku horumar sameeyo.Ayuu mustafa hadalkiisa ku soo afjaray.
Sida aan kor kusoo sheegnayba ma aha guulaha Mustafa kuwo iska yimid balse waa kuwa uu ka dameeyo dadaal iyo qorshe badan oo aad looga baaraan degey. Haddaba waxaa dhalinta soomaaliyeed ee ku dhaqan daafaha dunida la gudboon iney ku daydaan Mustafa ayna isku dayaan iney samaystaan qorshe iyo yool ay higsanayaan. Qorshahaasi waxaa uu noqon karaa mid waxbarasho, mid shaqo, mid ganacsi amaba mid ku wajahan qaybaha kala duwan ee Ciyaaraha.
Kol aan xiriir la sameeyey Mustafa muxamed, oo aan ka codsaday inaan wareysi ka qaado ku wajahan horumarkiisa iyo waxa uu kula talin lahaa dhalinta soomaaliyeed waxaa uu ii sheegay inuu markasta diyaar u yahay inuu wareysigaas I siiyo. Balse ciyaaraha fudud ee aduunka oo dhowaan bilaabanaaya iyo Mustafa oo ku jira diyaargarowgiisii ugu dameeyey waxaa aan doortay inaan wareysigaas la yeesho Mustafa kolka ay ciyaaraha aduunku dhamaadaan. Waxaan haddii alle idmo idiin soo gudbin doonaa wareysigaas.Inta ka horeysa taas n mustafa u rajeyneynaa guul iyo horumar lagu farxo.
Dhalinta soomaaliyeedna waxaan leeyahay noqda kuwo ku dayda Mustafa.
Aqoonyahanada soogalootiga ah oo ka qaxaya Sweden: Sanad walba in ka badan soddon kun oo qof ayaa Akhri..